Sechikamu che Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira (ABM) zano, ichi chishandiso chinonakidza. Sezvo iwe uchinangisa, kushambadza, kana kukurudzira zvigadzirwa zvako uye masevhisi kumakambani akasarudzika, unogona kuyambira vashandi vako vekutengesa kana iwo makambani ari kushanyira webhusaiti yako uye uone kwavanenge vachitaurirana pane yako saiti. Leadfeeder inoita kuti iwe uenzanise zvinyorwa zvemakaunzi ako kuLeadfeeder, kupa rep, uye kuziviswa pavanongoshanyira webhusaiti yako. Yako yekutengesa timu inogona kuzoteedzera nekuteedzera nechinangwa.
Kushandisa chishandiso chakadai kunogona kuwedzera ako ekutengesa zvikwata tarisiro pane yakakwira-chinangwa tarisiro yezvako zvekambani zvigadzirwa nemasevhisi. Na Leadfeeder uye yako CRM kana ABM chikuva, zvakajairika maitiro anogona kutaridzika seizvi:
Kana usiri kuita ABM, yako yekutengesa timu inogona kutarisa kumusoro kambani uye kuona kana iri tarisiro kana kwete zvichibva pane yayo kambani kambani.
Tags: account-based kushambadziragoogle analyticsgoogle data studiogsuitehubspottinotungamiramailchimpmicrosoft dynamics 365PipedrivesalesforceusimbeWebCRMzapierZoho